Hisy raha eto a !
Ao anatin’ny tolona tanteraka ny herivelona isan-tsokajiny eto amin’ny firenena ankehitriny. Eo ny fitondrana am-perinasa, izay miady mafy sy mampidera taim-by, fa mahery sy matanjaka, ka tsy ho sarotra aminy ny mifikitra eo amin’io toerany io, rehefa voailika ny mpifandrina mafimafy.
Tsy hifampifahavalo mandrakizay
Miha mafana ny rivotra politika eto amin’ny firenena amin’izao fotoana izao. Mihazakazaka mihitsy aza satria efa tena ankatoky ny fifidianana tokoa isika, ka eo ny efa mametraka ny paikadiny na dia mbola misy ihany aza aloha ny somary mihainohaino.
Fisandratana ahoana ?
Toy ny vara-datsaka sy fanesoana ny vahoaka Malagasy hatramin’izao ary tena hotsaroan’ny tantara mihitsy ny kabarin’ny filoham-pirenena farany teo nandritry ny fifampiarahabana nahatratra ny taona teny Iavoloha.
Noho ny hafenoan’ny rano be loatra …
Ambony ambany indray ny fiainam-pirenena, noho ny hafenoan’ny rano be loatra. Nijojo ny orana. Miantraika any anaty fiarahamonina efa ho taona maro ny fahasahiranana. Maro ny Malagasy no nindaosin’ny fahafatesana, mety noho ny aretina, ny famonoan-tena, ny lozam-pifamoivoizana, ny asan-jiolahy, ny loza voajanahary.
Fahasahiana sa fanonganan-tena ?
Anisan’ireo firenena 128 nitsipaka ny maha renivohitr’Israely an’i Jerosalema i Madagasikara.
Mandeha indray ny resaka fa misy ny fikononkononana fanonganam-panjakana, izay tsy fantatra intsony marina na iniana aely fotsiny. Manimanina ny fahefana efa tsy an-tanana intsony ve ireo efa za-dratsy tsy mahandry ny andro ririnina, ka mihevitra indray ny haka fahefana amin’ny fomba mamohehatra noho ny tsy fahandrasana ny fotoam-pifidianana ? Sa kosa ireo mbola mitazona ny familiana an’i Madagasikara no efa mahina tsy enjehina amin’ny ratsy atao ka tsy misaina afa tsy ny fionganany ? Tsy misy mantsy ny finiavana hanitsy ny dia fa ny fahazaran-dratsy toy ny afera maizina ihany no mbola hatao. Tsy mahagaga raha maro no efa te handrodana azy. Ny tsy azo lavina dia samy voan’ny tazom-pahefana, ka tonga amin’ny fitenin’ny tanora hoe “mivika” na koa hoe ahoana no hitazonana ny fahefana ho eo am-pelatanana mandrakizay ? Efa rotiky ny fitiavan-tena sy fitiavan-tseza ka tsy misy fety sy andavanandro intsony fa ataon’ny tazom-pahefana miverin-tsaina !